अशोकसिंह गाउँमै डलर कमाउँदै – NewsAgro.com
जीवन शैली सफलताको कथा
अशोकसिंह गाउँमै डलर कमाउँदै
December 13, 2013 August 18, 2015 newsagro0Comments Agriculture, chitlang, featured, Nepal, Newsagro.com
चित्लाङ (मकवानपुर), मकवानपुर चित्लाङका अशोककुमार सिंह ठकुरीलाई समाजमा परिवर्तन ल्याउने एउटै चिज भनेको राजनीति मात्र हो जस्तो लाग्थ्यो । त्यही मनस्थितीले जीवनका केही वर्È उनी राजनीतिमा पनि लागँे । ‘म कति समय त दलको स्थानीय नेता भएर भाषण पनि गर्थे’ अशोकले अतित् सम्झे । जिल्ला स्तरको नेता हुनासाथ उनले राजनीतिको स्कुलिङमा के सिके भने, अरुलाई गाली गर्नुपर्छ । छरछिमेकका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएपछि उनले शत्रु–मित्र, आफन्त–पराइ, उत्तरपन्थी दक्षिणपन्थी सबैलाई सराप्न मात्र सिके ।
‘राजनीतिले अरुलाई गाली गर्न मात्र सिकायो, आफूले आफूलाई हेर्न कहिल्यै सिकाएन,’ संवाददातासंग यथार्थ कोट्याए । ५० वर्षिय अशोककुमारले राजनीतिक जुलुसमा पछिपछि नारा लगाउँदा अगाडिको बाटो भेट्टाए । त्यो हो, बाख्रापालन । उनले सम्झे ‘यो राजनीति भन्दा धेरै माथिको कुरा हो ।’ १० वर्Èअघि पैल्याएको यो बाटोले उनको जीवन सर्लक्कै मोडिदियो । जीवनको यो मोडपछि अशोकलाई नाम र दाम मात्र दिएन, मुलुकमै एकमात्र बाख्राको चिज उत्पादकका रुपमा पनि स्थापित ग¥यो । अहिले अशोकले थालेको चिज उत्पादनकै कारण चित्लाङ चिज पर्यटनको मुली भएको छ । काठमाण्डौबाट जम्मा १७ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने चित्लाङको चिनारी फेर्न अशोकको अभियान ओखती भएको छ ।
अध्ययनमा एसएलसी मात्र उत्तीर्ण गरेका बाख्राविज्ञ अशोकले स्थानीय जातका झन्डै १ सय बाखा्र पालेकाछन् । अरुलाई गाली मात्र गर्न जानेका राजनीतिकदलको भन्दा अशोकको बुझाइ अलि फरक छ । बाख्रा र गाइपालनमा निकै अन्तर छ । उनी हिसाबकिताब गर्दै सुनाउँछन्–एउटा भैसीको दाम १ लाख रुपैयासम्म पर्छ भने, यो मूल्यबाट कम्तीमा १० वटा बाख्रा किन्न सकिन्छ । एउटा भैसीलाई चाहिने दानापानीले १० वटा बाख्रा टन्न अघाउँछ । एउटा भैसीले दिने आम्दानीभन्दा १० वटा बाख्राको आम्दानी बढी हुन्छ। एउटा भैसी म¥यो भने १ लाख डुब्यो, बाख्रा मरे १०-१५ हजार। यो सोझो हिसाबले पनि कृÈिप्रधान देशका ठूला योजनाकारहरुले बाख्राापालनमैं लगानी गर्न अशोकको सुझाव छ ।
‘कतार र साउदीतिर भेडाबाख्रा उ“ट स्याहार्न जाने नेपालीहरुको कथा–व्यथा पनि मैले सुनेको छु,’ अशोकले भने–‘ती दाजुभाइलाई यतै १०÷१५ वटा बाख्रा सहुलियतमा दिने र चिज उत्पादनको प्रविधि सिकाइ दिने हो भने रियालको होइन, डलरको आम्दानी यहीं हुन्छ ।’ अहिले काठमाडौंका धेरै होटलमा बाख्राको चिजको माग बढेको छ । बाख्राको दुधबाट बनेको चिज प्रतिकिलो एक हजार आठसय देखि तीन हजार रुपियाँमा विक्रि हुन्छ । अशोक महिनाको डेढदेखि दुई क्वीन्टल चिज विक्री गर्छन् । गाईभै“सीको दूधबाट बनेको भन्दा स्वादिलो अनि, स्वस्थकर पनि हुने भएकाले बाख्राको दूधबाट बनेको चिजको माग अझ बढी छ । अहिले बाख्राका दूधबाट बनेको चिजको बजार निकै राम्रो छ । बरु, उन्नत जातका बाख्रापालन गर्न नसक्दा दूध उत्पादन पर्याप्त हुन सकेको छैन । माग अनुसारको चिज उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
नेपालमै एउटा मात्रै रहेको बाख्राको चिज फ्याक्ट्री हेर्नका लागि देशविदेशबाट पर्यटकहरु चित्लाङ आइपुग्छन् । गाउ“मा भित्रिएका पर्यटकलाई स्थानीय स्तरमा नै बसाउने व्यवस्थाका लागि अशोकले नै पहिलोपटक चित्लाङमा होमस्टे शुरु गरे । ‘गोट चिज होमस्टे’ नाम दिएर अशोकले थालेको होमस्टे चित्लाङमा अहिले संगठित रुपमै संचालन भएको छ । अशोक मुलुककै बाख्राको चिजको एक मात्र उत्पादक मात्र भएनन् उनी चित्लाङको होमस्टेका अभियान्ता पनि बनेकाछन् ।
यसरी शुरुभयो चित्लाङमा चिज उत्पादन
वि.सं.२०५० सालमा मकवानपुरको चित्लाङमा किसानलाई लÔित गरेर एउटा फ्रान्सेली लामिलाविस हिमालय हजबुक नामक आइएनजीओले परियोजना संचालन गरेको थियो । चित्लाङमै रहेको सरकारी चिज उत्पादक फार्ममा आइएनजिओले चिज बनाउने मेसिन पनि सहयोग गरेको थियो । त्यो संस्थाको समूहमा बसेपछि बाख्रापालन पनि थालेका थियौ“ । त्यत्तिबेला हामी फार्ममा बाख्राको दूध बेच्थ्यौ“ । एकपटक त्यो आइएनजीओमार्फत सरकारी फार्मका कर्मचारी र एकजना डाक्टर फ्रान्स घुम्न गएका थिए । डाक्टर उतै पलायन भए, कर्मचारी फर्के । यो कुरा मलाई थाहा थियो ।
एकदिन समूहको बैठकमा सरकारी मान्छेलाई सहयोग गरेर हामी गरिबलाई देखाई खाने बाटो बनाउने भनेर म बम्किएँ । त्यतिबेला चित्लाङको सरकारी चिज फ्याक्ट्री बेकामे भइसकेको थियो । गाउ“कै किसानलाई प्रविधिको ज्ञान दिन यहाँ परियोजना संचालन गरिरहेको आइएनजिओलाई अनुरोध गरेपछि मलाई फ्रान्स जाने अवसर मिल्यो । त्यति बेलासम्म हामीले गाउ“मा बाख्रापालन गरेर आधा लिटर दूध बेच्ने हैसियत बनाइसकेका थियौ“ । बाख्रा मासुका लागि मात्रै होइन, यसको दूध स्वास्थ्यका लागि उपयोगी छ भन्ने पनि जानिसकेका थियौ“। मैले फ्रान्समा गएपछि बाख्राको दूधबाट चिज उत्पादन गर्ने प्रविधि सिके“ । म त्यहाँ एक महिना बसें । २०५९ सालमा नेपाल फर्किएपछि बेकामे भएको सरकारी चिज फ्याक्ट्रीका मेसिन गाउ“मा लगेर आफ्नै पहलमा चिज उत्पादन थाले“ । चिज उत्पादनको लागि सरकारी सहयोग कस्तो छ ? मलाई यो प्रश्नै नसोध्नुस् । अशोक भक्कानिए । राज्यले सहयोग गर्ने भए हिमाल कहिल्यै पग्लिँदैन । नेपाली झण्डा सँधै फरफराउँछ । युवा कहिल्यै बाहिरिँदैनन् । आश्वासन दिने व्यवहारमा नउतार्ने कस्तो देशमा हामी जन्मेछौं । मैले तपाइ जस्तो संचारकर्मीको ठूलो सहयोग पाएको छु । तपाइहरु आउनुहुन्छ सोध्नुहुन्छ अनि खेख्नुपनि हुन्छ । मलाई प्रचारमा असाध्यै सहयोग पुग्छ । तर सरकारी प्रतिनिधि आउँछन् सहयोग गर्छु भन्छन् पछि मुखै देखाउँदैनन् । यो चै अचम्मै लाग्छ ।
म फान्समै २५ सय युरो दिन्छु भन्दा नेपाल फर्केको मान्छे । उतिबेला मलाई आधा किलो चिज नबिक्दा मलाई डाहा भएको थियो । अहिले त्यो समस्या छैन । वि.सं. २०६७ सालबाट नेपाल डेरीबोर्ड फार्म नाम दिएर चिज फ्याक्ट्री दर्ता पनि गरेको छु । अहिले दिनको ४ देखि सातकिलो चिज बिक्रीका लागि उत्पादन हुन्छ । म कुनै दिन पनि उत्पादन रोक्दिन । महिनाको एकदेखि डेढ लाख रुपिया“सम्म उत्पादन हुन्छ । तर, अझै दूधको अभाव छ । उन्नत जातका बाख्रा आयातमा सरकारले सहयोग गरेको छैन । मेरो फार्ममा करिब नब्बेवटा बाख्रा छन् । एउटा बाख्राले आधा लिटरसम्म दूध दिन्छ । सान्नन् र अल्पाइन जातका बाख्रा विदेशबाट आयात गर्न सके एउटैबाट छाकमा पा“चदेखि सात लिटरसम्म दूध उत्पादन हुने थियो ।
← सहकारीमार्फत तरकारी खेती लाभदायक
साक्षर भएपछि महिलाहरु आत्मनिर्भर बन्न हौसिए →
थारु भन्छन्,' किनेर होइन, बेचेर खान सक्छौं'